Izifo zepipi: izici, izimpawu nemikhuba enempilo | Amadoda aSitayela
IsiJalimane Portillo | 24/05/2021 10:00 | Ezempilo
Impilo yepipi iyisici esibalulekile esimweni sendoda. Idlula ikhono lokuba nokugcina ukwakhiwa, ukukhipha ijusi nokuzala kabusha. Kuningi izifo zepenile ukuthi kufanele wazi ukuthi kufanele welaphe kanjani ngesikhathi ukugwema izinkinga ezizayo. Lezi zinkinga zingaba wuphawu lwesimo sempilo esingaphansi. Kunezinkinga eziningi zezempilo ezithinta ipipi futhi ezingathinta ezinye izindawo zempilo.
Ngakho-ke, kule ndatshana sizokutshela ukuthi yiziphi izifo eziphambili zepenisi, ukuthi kufanele uzibone kanjani nokuthi yiziphi izici zazo.
1 Izifo eziyinhloko zepipi
2 Izici ezithinta izifo zepenile
3 Ukubonana nodokotela nini
4 Imikhuba enempilo
Izifo eziyinhloko zepipi
Izinkinga zomthondo zingaba wuphawu lwesimo sempilo esingaphansi. Izinkinga zempilo ezithinta ipipi nazo zingathinta ezinye izici zempilo, zidale ingcindezi, izinkinga zobudlelwano noma ukungazethembi. Funda ngezimpawu nezimpawu zezinkinga zepenisi nokuthi ungayivikela kanjani impilo yepipi.
Izinkinga ezihlobene nokusebenza kocansi, ezocansi, kanye nempilo ye-penile zifaka:
Ukungasebenzi kahle kwe-Erectile: ukungakwazi ukuba nokugcina i-erection firm ngokwanele ukuze ukwazi ukuya ocansini.
Izinkinga zokujikisa: bonke labo abahlobene nayo bafakiwe kulezi zinkinga. Kulokhu sithola ukungakwazi ukukhipha umchamo, ukubambezeleka noma ukukhipha ngaphambi kwesikhathi ngaphambi kwesikhathi, okubuhlungu, ukuncipha kwe-ejaculation noma ukubuyisa kabusha i-ejaculation.
I-Anorgasmia: kungukufinyelela i-orgasm yize kunesikhuthazo esanele.
I-libido eyehlisiwe: Ukwehla kwesifiso sobulili.
Izifo ezithathelwana ngocansi: Kubandakanya zonke izinsumpa zangasese ezingadala ukuchama kabuhlungu, ukuphuma emthondweni, izilonda, amabhamuza njll.
Isifo sikaPeyronie, isimo esingelapheki esifaka phakathi ukukhula kwezicubu zesibeletho ezingavamile ngaphakathi kwepenisi, okuvame ukuholela ekuvukeni okugoqekile noma okubuhlungu.
Ukuphuka komthondo: Kungukuwohloka kwezicubu ezinemicu ebangelwe ngesikhathi sokukhethwa okwenziwe ngeshubhu epeni. Ngokuvamile kubangelwa ipipi eliqondile elishaya kanzima okhalweni lowesifazane ngesikhathi socansi.
Ukubheka phambili, ukwakhiwa okuphikelelayo futhi okuvame ukuba buhlungu okungabangelwa ukugqugquzela ngokocansi noma ukuvusa inkanuko.
I-Phimosis, isimo lapho ijwabu lepipi elingasokile lingenakuhoxiswa ekhanda lenduku, lidale ukuchama kabuhlungu nokumiswa.
I-Paraphimosis, isimo lapho ijwabu lingakwazi ukubuyela esimweni salo esijwayelekile ngemuva kokubuyiselwa emuva, okwenza ukuvuvukala okubuhlungu kwenduku nokuhamba kwegazi okungakhubazekile.
Umdlavuza: Ingaqala njengebhamuza kujwabu. Njengoba lesi sifo siqhubeka, zikhula zibe ukukhula okufana nensumpa okukhipha ubomvu obungamanzi.
Izici ezithinta izifo zepenile
Kuthinta ukuvela kwezifo ezahlukahlukene epipini. Ake sibheke ukuthi ziyini lezi zinto ezinobungozi, ezinye ziyashintsha futhi ezinye azikho.
Isifo senhliziyo, isifo sikashukela, nezimo ezihlobene: Isifo senhliziyo, isifo sikashukela, umfutho wegazi ophakeme, i-cholesterol ephezulu nokukhuluphala kungandisa ingozi yokungasebenzi kahle kwe-erectile.
Imithi: Ukungasebenzi kahle kwe-Erectile kungumphumela ongaba khona wemithi ejwayelekile eminingana, kufaka phakathi imishanguzo esetshenziselwa ukwelapha umfutho wegazi, imishanguzo yokudambisa imishanguzo, imishanguzo yokulala kadokotela, imishanguzo esetshenziselwa ukwelapha izilonda, nemithi esetshenziselwa ukwelapha umdlavuza wendlala yesinye.
Ukwelashwa komdlavuza wendlala yesinye: Ukususwa kokuhlinzwa kwe-prostate (radical prostatectomy) nezicubu ezizungezile njengokwelashwa komdlavuza wendlala kungadala ukungasebenzi komchamo nokungasebenzi kahle kwe-erectile.
Ukubhema: Kanye nezinye izingozi zezempilo, ukubhema kukhulisa amathuba akho okuba nokungasebenzi kahle kwe-erectile.
Ukuphuza utshwala ngokweqile: Ukuphuza ngokweqile kungaba nomthelela kwi-libido ephansi, ukungasebenzi kahle kwe-erectile, kanye nezinqumo ezimbi mayelana nokuziphatha kocansi.
Amazinga ama-hormone: Ingenye yezinto ezingashintsheka kakhulu, ngoba ihlobene nezakhi zakho zofuzo. Ukushoda kwe-testosterone ikakhulukazi kuhlobene nokungasebenzi kahle kwe-erectile.
Izici zengqondo: Ukudana, ukucindezeleka okukhulu, noma ezinye izifo zempilo yengqondo, kanye nemithi yokwelapha lezi zinkinga, kungakhuphula ubungozi bokungasebenzi kahle kwe-erectile. Futhi, ukungasebenzi kahle kwe-erectile kungaholela ekukhathazekeni, ekucindezelekeni, ekuzethembeni okuphansi, noma ekucindezelekeni okuhlobene nokuziphatha kocansi.
Ukuphazamiseka kwemizwa: Ukushaywa unhlangothi, ukulimala emuva nomgogodla, i-multiple sclerosis, ne-dementia kungathinta ukudluliswa kwemizwa yezinzwa isuka ebuchosheni iye ethangeni, okuholele ekungasebenzi kahle kwe-erectile.
Ukuguga: Kujwayelekile ukuthi uma sikhula kwehle amazinga e-testosterone futhi kuhlotshaniswa nengozi eyengeziwe yokungasebenzi kahle kwe-erectile. Ngaphezu kwalokho, kwandisa amathuba okwehla kwamandla we-orgasms, amandla okujula kanye nokuzwela okuphansi kwepenisi ukuthinta.
Ucansi olungaphephile: Yilezo ezenzeka ngaphandle kokuvikelwa kanye nabalingani abaningi. Futhi ezinye izindlela zokuziphatha zocansi ezandisa ubungozi bokuthola izifo ezithathelwana ngocansi.
Amaphutha: Ukubhoboza umthondo kungadala ukutheleleka kwesikhumba futhi kuphazamise ukugeleza komchamo. Ngokuya ngokuthi ukubhoboza kubekwe kuphi, kungaphazamisa namandla akho okufeza ukwakhiwa noma i-orgasm.
Ukubonana nodokotela nini
Lapho sibona inkinga, akufanele ngaso sonke isikhathi siye kudokotela sesaba. Kulezi zinhlobo zezimo, abantu bayazesaba impela izifo ezinjalo. Kumele simane siye kudokotela wethu ngezikhathi ezilandelayo:
Sibona izinguquko ngendlela ye-ejaculation
Izinguquko ezingazelelwe kwisifiso sobulili
Ukopha ngesikhathi sokuchama noma ukukhipha umchamo
Uma sinezinsumpa, izilonda noma izigaxa endondeni.
Uma sine-curvature evezwe kakhulu edala ubuhlungu noma ephazamisa umsebenzi wezocansi
Umuzwa ovuthayo lapho uchama
Ubuhlungu obukhulu ngemuva kokuhlukumezeka kwepipi
Ngaphambi kokuya kudokotela nganoma yisiphi isifo, kungcono ukuvimbela. Okwakho, kufanele uthole imikhuba enempilo. Ake sibone ukuthi yimiphi eminye yemisebenzi esingayethula osukwini lwethu lwanamuhla ukuze ibe nempilo:
Yenza ucansi oluphephile
Gomela i-papillomavirus yomuntu
Yenza ukuvivinya umzimba nsuku zonke
Imikhuba emihle yenhlanzeko
Yiba nesisindo somzimba esihle nokudla okufanele
Naka impilo yakho yengqondo
Yeka ukubhema inani elingenamkhawulo lotshwala obudlayo.
Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi ngezifo zepenile kanye nezici zazo.
Indlela ephelele ye-athikili: Amadoda aSitayela » Kufanelekile » Ezempilo » Izifo zepenile